Iindlela ezili-13 zoMxholo wokwenza imali kwi-Intanethi | Martech Zone
Iindlela ezili-13 zoMxholo wokwenza imali kwi-Intanethi
NgoLwesine, uJanuwari 5, 2017 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 1, 2017 Douglas Karr
Umhlobo olungileyo waqhagamshelana nam kule veki wathi unesihlobo esinesiza esifumana ukugcwala okukhulu kwaye bafuna ukubona ukuba azikho na iindlela zokwenza imali kubaphulaphuli. Impendulo emfutshane ngu-ewe… kodwa andikholwa ukuba uninzi lwabapapashi abancinci bayaliqonda ithuba okanye indlela yokwandisa inzuzo kwimpahla yabo.
Ndifuna ukuqala ngeepeni ... ndize ndisebenze kwiimali ezinkulu. Gcina ukhumbula ukuba ayisiyiyo yonke into yokwenza imali ngebhlog. Inokuba yeyiphi na ipropathi yedijithali- njengoluhlu olukhulu lwababhalisi be-imeyile, isiseko esikhulu kakhulu sababhalisi be-YouTube, okanye upapasho lwedijithali. Iitshaneli zentlalo azilunganga kwaye zibonwa njengezabanikazi beqonga endaweni yeakhawunti eqokelele oku kulandelayo.
Hlawula ngokucofa intengiso Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, umboniso endandiwubukele kumsitho obizwa ngokuba zezi izisombululo zomshicileli Intlalontle yewebhu. Yeyona ndlela ilula yokuphumeza-ukubeka nje ezinye iincwadi kwiphepha lakho kunye neentengiso ezithile. Iindawo zokubeka ziye zibhidi kwaye emva koko kuboniswe ezona ntengiso ziphezulu. Awenzi nayiphi na imali, nangona, ngaphandle kokuba loo ntengiso icofiwe. Ngenxa yokubhloka kwintengiso kunye nokuwohloka ngokubanzi kwintengiso ngokubanzi, cofa amaxabiso kwiintengiso aqhubeke ukwehla… njengoko kunjalo nengeniso yakho.
Iinethiwekhi zentengiso yesiqhelo Iinethiwekhi zentengiso zihlala zifikelela kuthi kuba zingathanda ukuba nazo uluhlu lwezinto ezinokubonelelwa sisiza esinokubonelelwa ngabo kwesi siza. Ukuba bendiyindawo yabathengi ngokubanzi, ndingatsiba ngeli thuba. Iintengiso zigcwele ukucofa kunye nezentengiso ezoyikisayo (kutshanje ndiye ndabona intengiso yefungus kwenye indawo). Ndizicima iinethiwekhi ngalo lonke ixesha kuba zihlala zingenabo abathengisi abancomekayo kumxholo nakwabaphulaphuli. Ngaba ndincama imali? Ngokuqinisekileyo… kodwa ndiyaqhubeka nokukhulisa abaphulaphuli ababambekayo abazibandakanyayo nabasabelayo kwintengiso yethu.
Iintengiso zokudibana - amaqonga anjengeKhomishini yeJunction kunye ybcddwa.com uneetoni zabathengisi abakulungeleyo ukuhlawula ukuze ubakhuthaze ngokusebenzisa amakhonkco okubhaliweyo okanye iintengiso kwindawo yakho. Ngapha koko, ikhonkco le-Share-A-Sale endisandula ukwabelana ngalo likhonkco lokudibana. Qiniseka ukuba uhlala uxela ukuzisebenzisa kumxholo wakho-ukungachazi kunokuphula imigaqo yomthetho eUnited States nangaphaya. Ndiyazithanda ezi nkqubo kuba ndihlala ndibhala ngesihloko esithile- emva koko ndiye ndafumanisa ukuba banenkqubo yokubambisana endinokufaka isicelo sayo. Kutheni ndingasebenzisi ikhonkco lokudibanisa endaweni ethe ngqo?
Iinethiwekhi zentengiso ye-DIY kunye noLawulo -Ngokulawula uluhlu lwakho lwentengiso kunye nokwenza ixabiso lakho, ungasebenzisa iqonga lemarike apho unokuba nobudlelwane ngokuthe ngqo kunye nabathengisi bakho kwaye usebenze ukuze uqinisekise impumelelo yabo ngelixa usonyusa ingeniso yakho. Singaseta amaxabiso asezantsi ngenyanga, indleko ngembonakalo nganye, okanye iindleko ngokucofa kweli qonga. Ezi nkqubo zikuvumela ukuba wenze intengiso yogcino- sisebenzisa iGoogle Adsense kuloo nto. Kwaye bayavuma indlu Iintengiso apho sinokusebenzisa khona iintengiso ezinxulumene nazo njengendawo yogcino nazo.
Intengiso yoLuntu - Kuya kufuneka ndikuxelele ukuba le indenza ndikhwime kancinci. Ukuhlawulwa ngokupapasha inqaku liphela, ipodcast, intetho, ukuyenza ibonakale njengomnye umxholo ovelisayo ubonakala ungathembekanga. Njengoko ukhula kwimpembelelo yakho, igunya kunye nokuthembela, uyalikhula ixabiso lepropathi yakho yedijithali. Xa uguqula ipropathi kunye nokuqhatha amashishini okanye abathengi ekuthengeni-ubeka yonke into oyisebenze nzima ukuyenza emngciphekweni.
Amakhonkco ahlawulelweyo -Ukuba umxholo wakho ufumana ukuqaqamba kweinjini yokukhangela, uza kujoliswa ziinkampani ze-SEO ezinqwenela ukubuyela umva kwindawo yakho. Banokucaba ngaphandle bakubuze ukuba ungabeka kangakanani ikhonkco. Okanye banokukuxelela ukuba bafuna nje ukubhala inqaku kwaye bangabalandeli abakhulu besiza sakho. Baxoka, kwaye bakubeka emngciphekweni omkhulu. Bayakucela ukuba wophule imigaqo yenkonzo ye-Injini yokukhangela kwaye banokukucela ukuba wophule imimiselo yomanyano ngokungabhengezi ubudlelwane bemali. Ngenye indlela, unokwenza imali ngamakhonkco akho ngokusebenzisa injini yokwenza imali njengekhonkco VigLink. Banikezela ithuba lokuxela ngokupheleleyo ubudlelwane.
Impembelelo - Ukuba ungumntu owaziwayo kwishishini lakho, unokufunwa ngamaqonga aneempembelelo kunye neenkampani zonxibelelwano zoluntu ukubanceda baphakamise iimveliso kunye neenkonzo zabo ngamanqaku, uhlaziyo lweendaba zosasazo, iiwebhu, iintetho zoluntu, iipodcast, kunye nokunye. Intengiso yempembelelo inokuba yinzuzo kodwa gcina engqondweni ukuba ihlala kuphela ukuba unokuchaphazela ukuthengisa- hayi ukufikelela nje. Kwaye kwakhona, qiniseka ukubhengeza olo lwalamano. Ndibona uninzi lwempembelelo kumzi mveliso wam ongabaxeleli abantu ukuba bahlawulelwa ukuxhoma ezinye iimveliso zeenkonzo kunye nezinye iinkonzo. Ndicinga ukuba kukunganyaniseki kwaye babeka igama labo emngciphekweni.
Ukuxhaswa -Iqonga lethu lemarike likwasivumela ukuba sibeke indlu iintengiso kunye nokubiza abathengi bethu ngokuthe ngqo. Sihlala sisebenza neenkampani ukwenza amaphulo aqhubekayo anokubandakanya iiwebhu, ii-podcast, ii-infographics, kunye namaphepha amhlophe ukongeza kwii-CTA esizipapasha kwiindawo zentengiso zendlu. Uncedo apha kukuba sinako ukwandisa ifuthe kumthengisi kwaye sisebenzise zonke izixhobo esinazo ukuqhuba ixabiso kwiindleko zenkxaso.
Ukudluliselwa -Zonke iindlela ukuza kuthi ga ngoku zinokulungiswa okanye amaxabiso asezantsi. Khawufane ucinge xa ​​uthumela undwendwe kwindawo, kwaye bathenga into eyi- $ 50,000, kwaye wenze i-100 yeedola ngokubonisa umnxeba wokuthatha isenzo okanye i- $ 5 ngonqakrazo. Ukuba endaweni yoko, uthethathethane ngekhomishini ye-15% yokuthenga, ngewenze i $ 7,500 ngokuthenga enye. Ukuhanjiswa kunzima kuba ufuna ukulandelela ukukhokelela kuguquko-olufuna iphepha lokufika elinomthombo wesalathiso otyhala irekhodi kwiCRM kuguquko. Ukuba luthethathethwano olukhulu, kusenokuthatha iinyanga ukuvala… kodwa kufanelekile.
Consulting -Ukuba uyimpembelelo kwaye unomxholo omkhulu olandelayo, mhlawumbi ukwingcali efunwayo kwicandelo lakho. Uninzi lwengeniso yethu kule minyaka ibikukubonisana nokuthengisa, ukuthengisa, kunye neenkampani zetekhnoloji ngendlela yokukhulisa igunya labo kunye nokuthembela kwi-intanethi ukugcina nokukhulisa ishishini labo.
iziganeko -Uzakhele abaphulaphuli abazibandakanya nabo abayamkelayo iminikelo yakho… kutheni ungaphuhlisi iminyhadala ekumgangatho wehlabathi ejika abaphulaphuli bakho abanomdla babe ngabantu abahlaselayo! Iziganeko zibonelela ngamathuba amakhulu kakhulu okwenza imali kubaphulaphuli bakho kunye nokuqhuba amathuba enkxaso abalulekileyo.
Iimveliso Zakho Ngelixa intengiso inokuvelisa ingeniso ethile kwaye ukubonisana kunokuvelisa ingeniso ebalulekileyo, zombini zikho kuphela okoko umthengi enjalo. Oku kunokuba kukuhamba ngokunyuka kwamahla ndenyuka njengoko abathengisi, abaxhasi, kunye nabaxhasi besiza behamba. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabapapashi lubhenela ekuthengiseni iimveliso zabo. Ngokwenyani sineemveliso ezininzi kuphuhliso ngoku ukubonelela abaphulaphuli bethu (jonga ezinye izinto ezazisa kulo nyaka!). Uncedo lokuthengisa uhlobo oluthile lwemveliso esekwe kubhaliso kukuba unokukhulisa ingeniso yakho ngendlela efanayo njengoko ukhulise abaphulaphuli bakho… enye ngexesha kwaye, ngokukhawulezileyo, ungafumana ingeniso ebonakalayo ngaphandle komntu ophakathi osikiweyo. .
Ukuthengiswa -Iipropathi ezingaphezulu nangakumbi ezinokubakho zedijithali zithengwa ngokuthe ngqo ngabapapashi bedijithali. Ukuthenga ipropathi yakho kwenza ukuba abathengi bandise ukufikelela kwabo kwaye bafumane isabelo senethiwekhi ngakumbi kubathengisi babo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ukhulise ukufundwa kwakho, ukugcinwa kwakho, uluhlu lwakho lokubhaliselwa kwe-imeyile, kunye nokugcwala kwakho kokhangelo. Ukuthenga itrafikhi kunokuba yinto onokukhetha kuyo ngokukhangela okanye kwezentlalo-okoko ugcina isahlulo esilungileyo sotrafikhi.
Senze konke oku kungasentla kwaye ngoku sijonge ukunyusa umvuzo wethu nge- # 11 kunye # 12. Zombini ezo zinto ziya kusibeka kubathengi abanokubakho xa sizifumana zonke zisebenza. Sele idlule iminyaka elishumi siqalile kwaye kungathatha esinye ishumi ukufika apho, kodwa asithandabuzi ukuba sisendleleni. Iipropathi zethu zedijithali zixhasa ngaphezulu kweshumi elinambini labantu - kwaye oko kuyaqhubeka nokukhula.
tags: iinethiwekhi zentengisoadsenseuthungelwano lwentengisoiadwordsumanyanisouqhagamshelwanoIngeniso yokubambisanakokubonisanaiziganekompe mbeleloimpembelelo kwintengisoukwenza imali onlineIiNkomfa zeNtengisoukwenza imaliukwenza imali iblogi yakhoyenza imali kwi-podcast yakhoyenza imali ngevidiyo yakhoimaliamakhonkco ahlawulweyoukukhuthaza imvelisoImali yokudluliselaukubhekisathengisa indawo yakhothengisa indawo yakhoiNkxasomzantsi
Kutheni le nto kufanelekile ukuba ubambe indawo yakho yokuhamba
Martech Zone: Wamkelekile kuPapasho lwam olutsha lweMartech!
Jan 16, 2017 kwi-8: 28 AM
Ezi zininzi zeendlela ezisemthethweni zokwenza imali ngomxholo wewebhusayithi ovelisa ukugcwala, ukuba unayo. Kukwakho nemida, kunye nomngcipheko, weendlela ezithile zokwenza imali, njengakwimeko yentengiso ye-PPC kunye neekhonkco ezihlawulelweyo, njengoko kuchaziwe. Umsebenzi omkhulu owenziweyo ekuziseni onke amava akho kunye nobuchule bakho ekubhaleni le posi. :)
Jan 16, 2017 kwi-11: 32 AM
Enkosi kakhulu, Beth!